IINGCAMANGO EZINGAMA-97 + EZIGQWESILEYO ZE-EAGLE TATTOO NGO-2021 - UHLOBO
Iingcamango ezingama-97 + ezigqwesileyo ze-Eagle Tattoo ngo-2021
yenaukhoziKudala ithathwa njengemascot yaseburhulumenteni yaseMelika, ukumelwa kwamaphiko kwayo yonke i-USA kumi: inkululeko, isibindi, kunye neliso elibukhali elundini phayaa.
WaseMelikaUkhozi umvambouyilokudala olona lizwe lunamandlauphawuyenkululeko kunye noburharha, nangona kunjaloukhozi‘Iimpawu ezityebileyo zibuyela umva kumawaka eminyaka, zithatha amazwe kunye neenkcubeko ezininzi.
Inkqubo ye-ukhoziyinto enoburharha kwaye intleintakaixhoba ekudala libonwa njengeumvamboumbonoukunxibelelana nobukhosi, ukomelela kunye nesibindi. Inkqubo ye-zemveliukhoziMotif ihlala ibonisaintakayibaneuphawuyobudoda, amandla, ubukhosi, ukugxila, kunye namandla.
Naphi na apho igazi lakho libaleka kwaye liphefumlelwe, iukhoziIitattoosvusa umnqweno kwindalo iphela wokulwela ngaphaya kwemida yomntu.
Funda ngokuqokelela ezona zingama-97 + ezingconoukhozi umvamboizimvo. Ukusuka ku singleiintsibaIitattoo kubugcisa bokwenyani bomzimba kunye nee icon zaseMelika zaseMelika, uya kubona ukudibanisa okupholileyoumvamboizifundo ezinentaka ezinamandla esibhakabhakeni.
1. I-Bald Eagle Tattoo
Bona ngakumbi malunga - Iingcamango ezingama-90 ze-Bald Eagle Tattoo Design
KungekudalaukhoziUbugcisa bomzimba yinto ethandwayo yaseMelikaumvamboUmfuziselo kwaye ngokufuthi inani lesibiniumvamboUkhetho lokufuzisela ukuthanda izwe kunye nenkululeko (Iflegi yaseMelikaIitattoosziNombolo 1).
Iimpawukungekudalaukhozi umvamboivela phakathi kweendawo ezihamba ngeebhayisikile, kwaye ikhule ecaleni kwenkcubeko yomthetho kunye nophawu lukaHarley Davidson. Inkanukoukhozi uphawuihlala ihamba nobomvu, mhlophe, luhlaza okwesibhakabhaka okanye iinkwenkwezi kunye nemivimbo yeIflegi yaseMelika.
Ezi mascots zase-United States zikwanazo nentsingiselo yokomoya eyandulelayo ngaphambi kwelizwe. KwiUmhlalii wasemelikainkcubeko ikungekudalaukhoziInxulunyaniswa nempumelelo engaphaya kokufa kunye nolawulo olungunaphakade kwamanye amazwe.
2. IiTattoos zokhozi lwaseMelika
Bona ngakumbi malunga - AmaTattoos ama-50 oMdabu waseMelika oMdabu
Iintaka ngumxholo oqhelekileyo kwimveliumvambouyilo. Isitayela sendabuko sichaphazeleka kakhulu yi-iconography yaseMelika, oku kuthethaiinkoziumvamborhoqo ubonise.
UninzizemveliukhoziIitattoosbonisaintakaamaphiko aso abaleke abaleke kunye neetalons zayo zolule ukuze zibambe okuthile.
Inkuluukubhabhaukhoziijongeka intle ngakumbi xa yolulwe esifubeni okanye ngasemva, kodwaencinciukhozi umvamboUyiloinokusebenza kwenye indawo.
Xa ubhangqiwe ngeinyokaumvambo,ukhozi uphawuinokumela uloyiso lokulungileyo phezu kobubi. Xa ifayile ye-zemveliukhozi umvamboIdityaniswe ne-anchor kunye ne-globe, ifuzisela i-United States Marine Corp.
3. IiTattoos zesifuba soKhozi
Bona ngakumbi malunga - I-80 Eagle Chest Uyilo lweTattoo
Ukhoziuyiloisebenza kakuhle kakhulu esifubeniumvamboubugcisa kubaukubhabhaukhozingamaphiko asasazekileyo alingana ngokugqibeleleyo esifubeni sonke.
Abaqokeleli abaninzi bakhetha ukugxila kwiukhoziintloko umvambookanye swoopingintakakwipaneli enye yebele.
Inkqubo ye-umvamboisitayileuqobo lwayo lunokulingana okanye aluxhomekeki kwisitayile ofuna ukusisebenzisa nokuba ufuna ukudibanisa ezinye izinto- ezinje ngeukhozi‘Siintsiba,indlu, okanyeIflegi yaseMelika- okanye intsingiselo eyongezelelweyo yomfuziselo kwiumvambo.
4. IiTattoos zoKhozi zasePoland
Bona ngakumbi malunga - Iingcamango ezingama-60 zePoland Eagle Tattoo
IsiPolishUkhozi umvambouyiloKukuphosa ekusekweni kwePoland njengelizwe kunyeukuthanda izweumvamboyethamsanqa.
Imbali ithi uLech, indoda efuna ilizwe lokuzalwa kubantu bayo, yama ebaleni nemikhosi yayo xa mhlophe qwaukhoziwaqala ukubangqinga. Ngokukhawuleza wabanga loo ndawo njengeyakhe kwaye yiyo loo nto iPoland yazalwa.
Uyilo lwePolandUkhoziyinto entsonkothileyo, kwaye inokuba luvavanyo olufanelekileyo lwe-umvamboumzobiSisakhono ngenaliti. Ukuba uphethe igazi lasePoland kwimithambo yakho, isiPolishUkhoziintle kakhuluintaka umvamboukhetho lokubonisa ikratshi lakho kwilizwe lomama.
5. IiTattoos zoKhozi zesizwe
Bona ngakumbi malunga - Uyilo lweTattoo yoyilo yoKhuphiswano
UKUYAisizwe ukhozi umvambobubugcisa obuchulumancisayo bomzimba. Ezi zilwanyana zikhazimlayo zibukhenketho, ngakumbi xa zinikezelwe ngendlela eyothusayoisizweifashoni.
Umhlalii wasemelikainkcubekoiqhotyoshelwe ngokubaluleka okukhulu kuyo yonke imizimba yokhozi- ngakumbiukhozi‘Siintsiba-Ukufana kwabo kwakubotshelelwe ekuqondeni incopho yamandla kabani omntu.
Ukhozi iintsiba umvambokwaye iukhoziiphikoyenza isilwanyana esithandwayoumvamboIitotems kwenyeisizwe umvambouluntu ngokunjalo.
Abaqulunqi abanomdla kunye naboumvamboumzobiInokudibanisa olunye uphawu okanye ukudibanisaisizwe umvambouyilonge-inki yokuthanda izwe okanye inkululeko.
6. Iingcamango zeTattoo Eagle yaseJamani
Bona ngakumbi malunga - Iingcamango ezingama-50 zeJamani zoKhozi
UmJamaniUkhoziidlule kumagama amaninzi ahlukeneyo ngexesha layo.
Kudala kwakubizwa ngokuba yi-ImperialUkhozikodwa ngoku kuthiwa yi-FederalUkhozi. I-FederalUkhoziyamkelwa emva ngonyaka we-1950 kwaye ibiyinxalenye yenkcubeko yaseJamani ukusukela, ngoku iyenza indlela eyahlukileyoukuthanda izweukhozi umvambo.
Ukungeniswa kwakhona kweJamaniUkhoziiza nembali etyebileyo, kwaye inxibe oku kunamandlauphawuihlala ibonisa inkxaso yomanyano lweJamani emva kokuphazamiseka kwayo ngaphambi kokuba udonga lwaseBerlin luwe.
7. I tattoo yoKhozi yaseMexico
Bona ngakumbi malunga - Uyilo lweTattoo yeeMpawu ezingama-50 zaseMexico
Inxalenye yengubo yaseMexico kwiflegi yelizwe, iMexicoUkhozi umvamboumbonoivela kwimvelaphi yakudala.
Imbali ithi inkosi yama-Aztec yanikwa umbono ovela koothixo bama-Aztec, uHuitzilopochtli. Fumana ifayile ye-ukhozi, Ebambe inyokaindlu, ehleli kwisityalo se-cactus, utshilo uHuitzilopochtli. Uya kwakha khona isixeko sakho.
Xa abantu baseAztec bafumana imeko enjalo, kuthiwa, isityalo ekuthethwa ngaso sasikhula embindini wechibi. Bengatyhafiswanga, iiAztec zakha isixeko esikhulu ngaphezulu kwechibi uqobo, kubandakanya iipiramidi ezinkulu kunye neetempile ezinkulu zokuhlonela oothixo babo.
Inkqubo ye-ukhoziihlale iyinxalenye ebalulekileyo yenkcubeko yabo, izemveliukhozi umvamboukuyauphawuyesibindi kunye nokuzimisela, ukungafi emzimbeni kwizixhobo ezinxitywe ngabantu abakhohlakeleyoUkhoziAmagorha.
Namhlanje, iMexicoUkhoziUkunyamezela phakathi kwembewu yanamhlanje yeAztec, emele ukunyaniseka, imboni, isibindi kunye noburharha, kwaye ihlala inxitywa ngokuzingca njengeiinkoziumvambongabo bafuna ukuzibandakanya ngokwabo ezi mpawu.
8. IiTattoos zoKhozi eziBuyayo
Bona ngakumbi malunga - AmaTattoos angama-50 okhozi
Amandla kunye namandla amangalisayo aboniswa bubuhleukhozi umvambouyilo.
Inkqubo ye-ukhoziIfom encomekayo ayinakuthelekiswa nanto kwaye yahlukile. Oku kuzukointaka-Iukhoziintloko,ukhozi‘Siintsiba, kunyeukhozi iliso umvambokananjalo-efuzisela amandla kunye nolawulo ngenxa yobume bayo bendalo, amandla, kunye nethuku lokusinda.
Ukhoziuyilo lwasemva- nokuba ngabaesengqiqweniumvambookanye isitayile esingaqondakaliyo- sinokubonisa ubabalo, amandla, kunye nomoya omsulwa. Uzotywe ngasemva, ngokungathiukhoziuyiloinegumbi lokubhabha phezulu kwaye uphonononge konke okungaphantsi kwayo.
9. I-Tattoo yeNtloko yoKhozi
10. Intsingiselo yeN tattoo yoKhozi lweNdabuko
11. I-Bald Eagle kunye ne-American Flag Tattoos
12. Iliso lokubonelela kunye neeTattoos zoKhozi
13. Ukhozi I-Tattoo eyiyo
14. Iingcamango zeTattoo zoKhozi eziPhezulu
15. Ingalo yokhozi iiTattoos
16. IiTattoos zokhozi lobuGcisa
iiTattoos ezincinci ezisecaleni kwabasetyhini
Ezona nkqubo zilungileyo zokuzilolonga emadodeni
umgangatho wamanqanaba amaninzi kunye nebhafu eshushu
ingalo yangaphambili yokugubungela umvambo
Iivesi zebhayibhile malunga netattoo yokholo
Andikwazi ukukhulisa iindevu meme
ukuba wenzeni xa utattoo wakho uchuba
ngowuphi owona mdlalo uphakamileyo wokufumana amanqaku we-nfl